I-Fourth Industrial Revolution: Indima yeSoftware yamahhala kule nkathi entsha | Kusuka kuLinux
Isine Revolution Yezimboni: Indima yeSoftware yamahhala kule nkathi entsha
Imikhakha ehlukahlukene ekhiqizayo yomhlaba ibhekene noshintsho olukhulu futhi olusheshayo phakathi nalokhu I-Fourth Industrial Revolution. Revolution ebonakala ngokusetshenziswa kobubanzi obubanzi be «nuevas tecnologías» ezihlanganisa okukhona imihlaba yomzimba, yedijithali neyebhayoloji, ethinta konke imikhakha, ezomnotho nezimboni, futhi lokho kuze kufike ekuphoseleni inselelo imibono ekhona ngalokho Umuntu.
Kulokhu Inguquko Yesine Yezimboni, okukhona Amathuluzi wemvelo (Izicelo, Amasistimu namaPlatform) kukhona «Software Libre y Abierto» ukwamukelwa kwasho «nuevas tecnologías», kuvumela i- Izinhlangano kungaba ngaphezulu ukuncintisana nenzuzo kulezi zikhathi. Yize futhi i- isici somuntu Kubalulekile, ikakhulukazi ezingeni lokuqeqeshwa nokuphathwa kwalawa mathuluzi.
Ibinzana: "Idatha ingowoyela wekhulu lama-XNUMX" kuthatha ukuhlobana okukhulu ngaphakathi kwalokhu I-Fourth Industrial Revolution, ngoba, kulokhu okwakamuva kanye ne- «nuevas tecnologías» hhayi kuphela ezingeni lokusebenza, kepha ngqo engxenyeni ngayinye yenqubo yokukhiqiza noma ukwenziwa kwe- Inhlangano
Futhi ngokunembile, i- «Software Libre y Abierto» ku Izinhlangano kusiza ukuthi nsukuzonke lobu buchwepheshe obusha bungaqaliswa ngentengo ephansi noma ngoziro, kuvuna i- Inhloso yebhizinisi ngayinye.
1 Luyini uguquko lwesine lwezezimboni?
2 Indima ye-Free Software ku-Fourth Industrial Revolution
Luyini uguquko lwesine lwezezimboni?
Eminyakeni engu-4 edlule, ngo-2016, ngesikhathi se- Inkundla Yezomnotho Yomhlaba (Isithangami seDavos) kufinyelelwe esiphethweni esicacile: "Umhlaba ubhekene neNguquko Yesine Yezimboni". Iphinde yabona ukuthi i-Intanethi yinto engekho engasaguqula izimpilo zabantu njengasekuqaleni kokudalwa kwayo, kepha kunalokho iyiqiniso lansuku zonke njenganoma iyiphi enye.
Kulesi sithangami, kuphinde kwacaca ukuthi:
“Kunezizathu ezintathu zokuthi kungani izinguquko ezikhona manje zingamele ukwelulwa kwenguquko yesithathu yezimboni, kodwa ukufika kwesinye esihlukile: ijubane, ubukhulu kanye nomthelela ezinhlelweni. Ijubane lentuthuko yamanje alikaze libonwe emlandweni… Futhi liphazamisa cishe yonke imboni emazweni wonke ”.
Futhi ngokusho Klaus Schwab, Umqondisi Omkhulu we I-World Economic Forum nombhali we incwadi «The Fourth Industrial Revolution», le nguquko entsha:
"Akuchazwa ngobuchwepheshe obusafufusa ngakunye, kepha ngokushintshelwa ezinhlelweni ezintsha ezakhiwe kwingqalasizinda yenguquko yangaphambilini yedijithali."
Ngakho-ke, phakathi kwabaningi izindawo noma ubuchwepheshe egijima kumanje Internet noma baphumula kuso, nokuthi yibona abanikeza umzimba noma akuchaze kahle lokhu I-Fourth Industrial Revolution, singasho okuhambisana kakhulu okulandelayo:
I-Artificial Intelligence namaRobhothi
I-Intanethi Yezinto, i-Intanethi Yabantu kanye ne-Intanethi Yakho Konke
Ukushayela Okuzimele namaDrones
Amanethiwekhi we-5G nezinethiwekhi ze-WiFi 6
I-Quantum ne-Cloud Computing
I-Biotechnology, iNanotechnology neNeurotechnology
Imithi yocingo, iTele-education neTele-work
Ukufunda Okujulile Nedatha Enkulu
Ukuphrinta kwe-3D, ukungokoqobo okungathandwa kwabathelisi esikubona kanye neqiniso langempela
Izinhlelo ezintsha zokukhiqiza nokugcina amandla
Indima ye-Free Software ku-Fourth Industrial Revolution
Esihlokweni esedlule sishilo Isoftware Emahhala futhi Evulekile: Umthelela Wezobuchwepheshe Ezinhlanganweni siveza okulandelayo:
"Namuhla kusobala ukuthi ukusetshenziswa kwezicelo, amasistimu nezixazululo ezisuselwa kwiFree and Open Software kusiza futhi kwehlise izindleko zokufaka nezinqubo ezintsha emhlabeni wezomnotho wedijithali, kanye nomnikelo weMiphakathi Yesoftware Yamahhala ngokuthi ngemisha evulekile kusiza izinhlangano zamukele kalula ushintsho lwedijithali".
"Ngakho-ke, akuyona imfihlo kunoma ngubani ukuthi njengamanje, iFree and Open Software isiza izinhlangano ukuthi zihambe futhi ziqhubekele phambili endleleni eya kuguquko lwedijithali, ukuze ziphendule ngendlela esheshayo nephumelelayo ekukhuleni futhi okusheshisayo okukhulayo izimfuno zebhizinisi".
Futhi sisho uhlu olude lwe Amathuluzi asuselwa ku- «Software Libre y Abierto» ezenza ukuthi izinkampani zigcine zisesikhathini, okungukuthi, ngaphakathi kwe- ubuchwepheshe besimanje ngentengo ephansi. Faka kuhlu esikuncoma ukuthi ulubuyekeze futhi ugcine lukhona.
Kodwa-ke, sifuna ukwengeza kulolu hlu enye ikholi eyodwa I-OpenIL (Vula i-Linux Yezimboni), okungekho okungaphezu kwalokho, ngokusho komdali wayo:
"Ipulatifomu yesoftware yomthombo ovulekile ye-automation yezimboni".
Kamuva, ngokuqinisekile kwesinye isihloko, sizokhuluma ngokuningiliziwe ngakho, kepha okwamanje singakucacisa lokho «OpenIL», yi-Linux Distribution egxile ekusebenziseni okuzenzakalelayo kwezimboni futhi yadalwa yinkampani Ama-Semiconductors eNXP, umholi womhlaba kuzixazululo zokuxhuma eziphephile.
Futhi lokho ngokufanayo, kuyamaka kuye «Software Libre y Abierto», iminyaka engu-3 manje, isiqalo, indlela, iphephile futhi iphumelele kumkhuba omusha we ezishintshayo zezimboni ngaphakathi kwe- I-Fourth Industrial Revolution.
Sibona kanjani, i- I-Fourth Industrial Revolution Kulapha futhi manje, kugcwala isikhathi sethu. Futhi kancane kancane lisicwilisa ezingxenyeni ezinkulu ezisusa izindlela ezintsha zokubona nokwenza izimpilo zethu. Ngethemba, okufanayo akuhambisani kuphela ne «Software Libre y Abierto»kepha okwayo ifilosofi nenkululeko, usilethele izinzuzo eziningi kunokulimala esikhathini esifushane, ngakunye futhi ngokuhlanganyela, ukufeza umhlaba ongcono wabo bonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Isine Revolution Yezimboni: Indima yeSoftware yamahhala kule nkathi entsha
AbakwaGoogle bakhiphe uhlobo olusha lweMendel Linux 4.0
Uhlobo olusha lweLibreELEC 9.2 lufika ngokusekelwa kweRaspberry Pi 4